प्रविन र रचनाले गाए स्व. राष्ट्रकविको संझनामा 'उनको प्रिती' - Himalay Online Media
प्रविन र रचनाले गाए स्व. राष्ट्रकविको संझनामा ‘उनको प्रिती’
स्व. राष्ट्रकवि माधव प्रशाद घिमिरेले २०२४ सालतिर अर्थात आज भन्दा ५३ वर्ष अघि कोरेको ‘उनको प्रिती’ बोलको गित पुन: निर्माण गरिएको छ ।
शाहरुखको ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’लाई आयो कानुनी पत्र
गायिका सरुको तिज विशेष कोशेली “रातो सारीमा” बजारमा (भिडियो सहित)
पहिलो पटक नेपालमा टाईटल विनर फेशन शो भव्य रुपमा सम्पन्न।
कुलमान घिसिङको बिदाइ; निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा कोइरालालाई नियुक्त।
युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त, खतिवडले मन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा पाउने।